Taliban oo ka digtay guurka xaasaska badan |
Hoggaamiyaha Taliban ee dalka Afghanistan ayaa soo saaray wareegto uu ku boorrinayo hoggaamiyeyaasha kooxda iyo taliyeyaasha inay iska daayaan guurka xaasaska badan, oo uu yiri wuxuu “kasbanayaa camabareyn ka timaadda cadowgeenna”, sida uu ku warramayo weriyaha BBC-da Khudai Noor Nasar.
Ragga Muslimiinta ah waxay diintu u oggoshahay inay guursadaan ilaa afar xaas, guurka badan ayaana weli sharci ka ah Afghanistan, Pakistan iyo dalal kale oo Muslimiin ah.
Balse ilo Taliban ah ayaa BBC-da u sheegay in dhaqankaas uu abuurayo kharash ay dalbanayaan taliyeyaasha kooxda si ay yarad uga dhiibaan caruusadda – kaas oo dhaqan u ah qowmiyadaha Pashtun-ka ee Afghanistan iyo Pakistan, iyadoo lacag la siiyo qoyska gabadha si ay u bixiyaan una oggolaadaan guurkeeda.
Wareegtada kooxda ayaa ku soo aadeysa xilli siyaasadeed oo xasaasi u ah Taliban iyo dalkaas, iyadoo kooxda ay wada hadallo ku saabsan mustaqbalka dalka kula jirto dowladda. Ilo ayaa sheegay in hoggaanka Taliban uu ka walaacsanaa eedeymaha musuqmaasuqa la xiriira ee ka dhanka ah xubnaha isku dayaya inay dhaqaale badan u helaan guryahooda badan.
Inta badan hoggaamiyeyaasha sare ee Taliban waxay leeyihiin in ka badan hal xaas, balse wareegtada cusub ma saameyneyso kuwa hore u lahaa xaasaska badan.
Maxaa ku xusub wareegtada?
Wareegtadan oo labo bog ka kooban, oo uu ku xusan yahay magaca hoggaamiyaha Taliban ee Afghanistan Mullah Hibatullah, ma mamnuuceyso guur labaad, kan saddexaad iyo afaraad, balse waxay ka digeysaa kharashka badan ee ku baxa xafladaha guurka taas oo soo jiidi karta cambaareyn ka timaadda mucaaradka Taliban.
“Haddii dhamaman hoggaamiyeyaasha iyo taliyeyaasha ay ka fogaadaan guurka badan, uma baahnaan doonaan inay ku lug lahaadaan musuqmaasuq iyo howlaha sharci darrada ah,” ayaa lagu yiri wareegtada.
Balse wareegtada ma saameyneyso guurka badan ee ragga aan carruur heysan, xaaskoodii hore aysan u dhalin wiilal, kuwa dumaalaya, amaba kuwa ay qoysaskoodu leeyihiin hanti ay ku guursadaan xaasas badan.
Wareegtada ayaa lagu sheegay in xaaladahaas oo kale, ragga guursanaya xaasas badan ay oggolaasho ka raadsadaan hoggaamiyaha kooxda kahor qabanqaabada guurka.
Ilo Taliban ah ayaa BBC-da u sheegay in warqadda lagu baahiyay gudaha Afghanistan iyo Pakistan.
Waa sidee heerka guurka xaasaska badan?
Guurka xaasaska badan ayaa ku baahsan gudaha bulshada Pashtun ee dalalka Afghanistan iyo Pakistan, iyadoo haweenku aysan wax ikhtiyaar ah ku lahayn cidda iyo goorta ay guursanayaan.
In haweeneydu aysan dhalin carruur – gaar ahaan wiil – ayaa aalaaba loo aaneeyaa sababta guurka badan. Sabab kalena waa arrin gudaha qoyska ka dhex taagan oo aalaaba haweeneyda loo saariyo.
Haweeneyda laga dhintay waxaa mar walba loo guuriyaa ninka dhintay walaalkiis – taa soo loo arko tallaabo lagu dhowrayo sharafta haweeneyda iyo qoyska, inkastoo xitaa ninka walaalkii uu xaas kale qabo. Dadka leh hantida badan ayaa iyaguna guurka xaasaska badan u arka sharaf.
Sarkaal ka tirsan Taliban Mulah Abdul Ghani Baradar wuxuu qabaa saddex xaas
Cadaadiska dhaqaale iyo dhaqamada bulshada oo is beddelaya ayaa muddooyinkii la soo dhaafay hoos u dhigay guurka xaasaska badan, balse ayay tiri Rita Anwari, oo u dhalatay Afghanistan una dhaqdhaqaaqda xuquuqda dadka oo ku nool Australia.
Islaamka ayaa ragga u oggol guurka axasaska badan balse “shuruudo ayaa la dul dhigay”, ayay tiri Ms Anwari, “sida haddii xaaskii hore ay xanuunsan tahay amaba aysan carruur dhali karin, waxaana sidoo kale jira caddaalad u sameynta”.
“Nasiib darro, ragga maanta ee talada haya way illaabeen dhammaan arrimahaas iyagoo dareenka naftooda un eegaya,” ayay tiri, iyadoo ku eedeysay in “marmarsiyo yar” ay ku guursadaan xaasas badan.
“Gebi ahaanba waa khalad inaad xaasas badan guursato haddii aadan si siman u daryeeli karin – dhaqaale, jir ahaan, iyo maskax ahaanba,” ayay tiri.
Inta badan hoggaamiyeyaasha sare ee Taliban waxay qabaan xaasas badan. Hoggaamiyihii aasaasay kooxda ee geeriyooday Mullah Mohammad Omar, iyo ninkii kooxda uga dambeeyay, Mullah Akhtar Mansoor, labaduba waxay qabeen saddex xaas. Hoggaamiyaha haatan ee kooxda Taliban, Mullah Hibatulah, labo xaas ayuu qabaa.
Sarkaalka ugu sarreeya Taliban ee ku sugan Dooxa, Mulah Abdul Ghani Baradar, wuxuu qabaa saddwex xaas – tii ugu dambeysay wuxuu shegay inuu guursaday xilli uu ku jiray xabsi ku yaalla Pakistan.
Haweenka Afghanistan wax badan kama dhihi karaan cidda iyo xilliga ay guursanayaan (sawir hore)
Ku dhowaad dhanmmaad hoggaamiyeyaasha kooxda ee ku sugan Dooxa waxay qabaan xaasas badan, waxaa ku jira kuwii dhowaan laga sii daayay xabsiga Mareykanak ee Guantanamo Bay.
Markii ay BBC-du la xiriirtay ilo ka tirsan Taliban ayna weydiisay hoggaamiyeyaasha Taliban ee xaasaska badan leh, midkood ayaa si fudud ugu jawaabay: “Yaan lahayn?”
Maxaa hadda loo xakameynayaa guurka xaasaska badan?
Sanado badan, saraakiisha dowladda ee ku sugan Afghanistan aya tilmaamay in iyadoo hoggaamiyeyaasha Taliban ay aalaaba ku nool yihiin nolol raaxo leh, haddana ciidamadooda ay yihiin kuwo sabool ah.
“Warka wanaagsan wuxuu yahay in dagaal yahannada Taliban ay ka daaleen dagaalka iyadoo [hoggaamiyeyaasha Taliban] ay guursanayaan xaaskii afaraad ama shanaad iyagoo noloshooda ku raaxeysanaya,” ayuu yiri Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani.
Waxaa jira warar sheegaya in taliyeyaasha Taliban ee Afghanistanay xoog xaasas ku guursadeen.
Sidoo kale dhaqaalaha xad dhaafka ah ee lagu bixiyo guurka ayaa walaac ku abuuray hoggaamiyeyaasha Taliban. Wararka ayaa sheegaya in taliyeyaasha iyo dagaal yahannada ay guurka ku bixiyeen lacag u dhaxaysa 2m ilaa 8m oo lacagta Afghanistan ah ($26,000 ilaa in ka badan $100,000), ama waxay ka bixiyeen lacagta kooxda amaba siyaabo kale oo su’aal keeneysa.